Nwepu wepu GX site vFlyteAir v5.1 X-Plane 10 - Rikoooo
X-Plane 10 ụgbọelu
dị iche iche ugbo elu
Wepu GX site na vFlyteAir v5.1 X-Plane 10
downloads 4 549
Version maka XP10. Maka ụdị dakọtara na X-Plane 9 pịa ebe a.
a add-on Remos GX bịara nke abụọ n'asọmpi a haziri na Jenụwarị 2013 x-plane.org. An add-on nke ezigbo njiri mara mma ebe ejirila simulation mee ihe maka ezigbo eziokwu (lee vidiyo). POH so na nbudata ahụ. You nwere ike fepu Gbanyụọ GX dịka ọnụọgụ dị na POH. Remos na-atụ aro ogo 20 nke flaps na nkwụsị. Weghachite flaps nwayọ nwayọ mgbe ị nwetachara ọkwa nrịrị ọrịrị. Crugbọ mmiri kachasị mma bụ 4800-4900RPM - trim dika achọrọ. Oge ikpeazu kwesiri ịbụ ihe dị ka. 75MPH nwere ogo ogo 15-20. Vso dị ihe ruru. 44MPH. Enwere autopilot abụọ abụọ na-adịghị mma (Isi na Altitude) na panel maka ịdị mma gị. Rịba ama na Isi na-eji HDG BUG na HSI, ọ bụghị GPS ma ọ bụ VOR OBS!
The Remos G3 Mirage na Remos GX bụ variants nke a nnukwu nku, abụọ-nmehie, otu engine, ìhè ụgbọ elu, wuru na Germany na-ere n'ụwa nile. Remos GX bụ nke ugbu a nlereanya ebe ọ bụ na 2006.
Onye edemede: vFyteAir
Họrọ Tu-204 Tupolev X-Plane 10
Eklips 550 v1.1 X-Plane 10